Ithegi: ukudityaniswa kwe-cms | Martech Zone
Ithegi: ukudityaniswa kwe-cms
Ngaba uvulelekile kwiNkqubo eNtsha yoLawulo lweMixholo?
NgoLwesihlanu, ngoJuni 23, 2017 NgeCawa, uJuni 25, 2017 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, i-100% yabathengi bethu basebenzise iWindowsPress njengenkqubo yolawulo lomxholo. Kwiminyaka nje emibini kamva kwaye elo nani lehlile malunga nesithathu. Oko bendiphuhlisa kwaye ndiyila iisayithi kwiWordPress kangangeminyaka elishumi ngoku, ndihlala ndijonga kule CMS ngenxa yezizathu ezimbalwa. Kutheni sisebenzisa i-WordPress Incredible Theme iindidi kunye nenkxaso. Iindawo ezinje ngeMixholo yehlathi ziyintandokazi kum apho ndingafumana eyona